A na-anabata ndị njem nleta na Mauritius ma ọ bụrụ na ha anọ ogologo oge
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Mauritius » A na-anabata ndị njem nleta na Mauritius ma ọ bụrụ na ha anọ ogologo oge
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
ozi ọma 07 xavier coiffic byahlritqjo unsplash
Ugbu a, ndị niile na Mauritius Tourist Promotion Authority nwere ike ime iji kpọsaa ịma mma nke agwaetiti ahụ bụ ihe ngosi nke ọdọ mmiri turquoise. Ọbịa kwesịrị inwe ndidi.
Na ITB Berlin UGBU Arvind Bundhun, onye nduzi nke MTPA, kwuputara olile anya ya na ya nwere ike ịnabata ndị ọbịa ọzọ n'oge ọkọchị a. Mauritius ji nwayọọ nwayọọ na-ebelata ihe mgbochi njem yana ebe 1 October 2020 mepere ókèala ya nye ndị obodo Mauritia, ndị bi na ndị njem na-achọ ịnọ ogologo oge na Mauritius. Onye ọ bụla ga-anwale ule PCR ụbọchị asaa tupu ya agaa ma kpọpụkwa ya n'ụlọ nnabata maka ụbọchị 14 mgbe ọ bịarutere. Nke a pụtara ịdebanye ngwugwu kwarantaini tupu oge eruo nke gụnyere ebe obibi akwadoro, nyefe na họtel na ndị isi oche, ebe a na-eme nyocha PCR na ụbọchị 7 na 14 nke oge iche.
Arvind Bundhun kwuru na mmeghe nke ala maka ndị njem mba ụwa nwere ike ime n'oge ọkọchị, mana nke a ga-achọ ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị elu n'etiti ndị bi na ya. Ekpebebeghi ma ịgba ọgwụ mgbochi ọ ga-abụ ihe dị mkpa maka ịbanye. Ruo oge ahụ, cams dị ndụ na weebụsaịtị www.mauritiusnow.com ga-enye njikọ mara mma na Mauritius.
A na-akpọ akwụkwọ ikike mbata nke ga-enye ohere ịnọ ogologo oge maka ndị ọbịa na Mauritius, ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ site n'ụlọ dịka ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na enwere ike ịkwụsị mmachi njem a n'oge okpomọkụ ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Mauritius na-enwe olileanya maka ihe dị ka ndị ọbịa mba 300,000 n'ime ọnwa ise fọdụrụ ruo ọnwa isii nke 2021 - ndị ọbịa 733,000 rutere n'etiti July na December 2019.
Na ogologo oge, Mauritius bu n'obi itinye ihe kachasị mkpa na njem nlegharị anya, Bundhun kwuru. Ahụike ahụike dịkwa mkpa na nke ahụ.